कुन उमेरमा सेक्स गर्दा बढी आनन्द ? जान्नुहोस - E ALL NEPAL
कुन उमेरमा सेक्स गर्दा बढी आनन्द ? जान्नुहोस
मानिसले कुन उमेरमा सेक्सबाट बढी सन्तुष्टि हासिल गर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । यस्तोमा हालै भएको एउटा ताजा सर्भेको निष्कर्ष छ महिलले २६ वर्षको उमेरमा र पुरुषले ३२ वर्षको उमेरमा यौन सन्तुष्टि बढी हासिल गर्छन् ।
अमेरिकी सेक्स टोय उत्पादक कम्पनी ‘लभ हनी’ ले गराएको एउटा अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । सर्भेमा १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका एक हजार मानिस सहभागी थिए ।यसअघि पुरुषको तुलनामा महिललो बढ्दो उमेरमा बढी यौन आनन्द प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्थ्यो । पुरुषले १८ वर्षको उमेरमा र महिलाले३५ वर्षको उमेरमा सेक्स गदाृ बढी आनन्दन हाँसिल गर्ने बताइन्थयो ।
सर्भेमा सहभागीलाई तपाईको भर्जिनिटी कहिले भंग भएको थियो ? कुन उमेरमा सेक्स गर्दा सबैभन्दा आनन्द आएको थियो ? कुन उमेरमा बढी सेक्स गर्नुभएको थियो ? जस्तो प्रश्न सोधिएका थिए ।सर्भेमा सहभागी अधिकांश पुरुक्षले १७ वर्षको उमेरमा र महिलाले १६ वर्षको उमेरमा भर्जिनिटी गुमाएको बताएको थिए ।
Previous article जीवनमा भुलेर पनि गर्न नहुने ५ काम
Next article मोबाइलबाट धेरै मेसेज पठाउने बानी छ भने आजै देखि छोड्नुस् नत्र...